RASMI: Kooxda Barcelona oo shaacisay lambarka uu u xiran doono saxiixeeda cusub ee Frenkie de Jong & Laacibka looga siibay – Gool FM
(Barcelona) 15 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa shaaca ka qaaday in Frenkie de Jong uu xilli ciyaareedka soo socda 2019/20 u xiran doono maaliyadda lambarka 21-aad, taasoo ciyaaryahan naadiga ka tirsan looga siibay.
Lambarkan 21-aad ee la siiyey Frenkie de Jong waxaa horay kooxda Barcelona ugu xiran jiray Carles Alena, laakiin ugu dambeyn waxa uu ku wareejiyey De Jong.
Wararka laga helayo gudaha Spain waxa ay sheegayaan in Carles Alena uu garowsaday inuu lambarkan 21-aad siiyo Frenkie de Jong oo ka codsaday maadaama uu lambarkan xusuus gaar ah u leeyahay.
Laacibka khadka dhexe ee Spain ayaa ogolaaday codsiga kaga yimid De Jong, waxaana uu u siibay lambarka 21-aad ciyaaryahankii hore ee kooxda Ajax.
Si kastaba ha ahaatee waxaa xusid mudan in Frenkie de Jong markii uu yimid kooxda Barcelona loo soo bandhigay inuu qaato maaliyadda lambarka 14-aad ee uu u xiran jiray halyeeygii Barcelona iyo Holland Johan Cruyff laakiin waa uu diiday.
Waxa uu ku adkeystay inuu helo maaliyadda lambarka 21-aad oo uu kooxda markaas u watay Carlos Alena, balse xiddiga xulka qaranka Holland oo 22-sano jir ah ayaa haatan gacanta ku dhigay lambarkii uu jeclaa oo uu xiran jiray waqtigiisii Ajax iyo Netherlands.
De Jong muhiim ayuu u yahay lambarkan 21-aad sababo qoys darteed, De Jong awoowgiis, Hans de Jong ayaa dhintay maalintii uu u dabaaldegayay dhalashadiisii 21-aad tan iyo markaas De Jong waxa uu xiranayay lambarkaan si uu ugu xasuusto awoowgiis.
Si kastaba ha ahaatee, Alena ayaa isna lagu taagay lambarka 19-aad oo uu ka xushay lambarradii la heli karay ee ka bannaanaa kooxda Barca ee kala ahaa; 16, 17, 19, 24 iyo 25.